लैंगिक विभेदकाे पराकाष्ठ
डक्टरले औषधी लेखेर दिएको पुर्जी बिरामीलाई ढोगाएर सिरानमुनी राखिदिए के होला ..?
खुलेर बोलौँ । लौंगिक विभेद अन्त्य गरौँ । समतामुलक समाजको सिर्जना गरौँ ।" नेपालमै पहिलाे पटक महिनावारी स्वच्छता दिवसको अवसरमा सामाजिक न्याय र समताको लागि पहल नेपाल र सारङ्गी न्यूज डटकमको सहकार्यमा एक महिने ‘महिनावारी : पाप कि प्रतीक’ अभियानको सुरु गरिएको छ ।
दुई चरणमा एक महिना सम्म संचालन गरिने याे अभियान मे फस्ट देखी १२ दिन सम्म स्वयम महिलाका महिनावारी पीडालाई समेटीने छ । दोस्रो चरणमा १३ गते देखी २५ गते सम्म नागरीक समाज, सामाजिक अभियान्ता र जनप्रतिनिधी विच छलफल र बहस हुनेछ । २८ गते महिनावारी स्वच्छता दिवसमा वृहद सार्वजनिक बहस गरिने छ । पहिलाे चरणकाे छैटाैँ सामाग्री अधिकारकर्मी,कवि विमला कार्की काे 'महिनावारी लैंगिक विभेदकाे पराकाष्ठ '
ममताको अर्को कुनै गहिराई छ भने - ती हुन् नारी । नारी पहिला अनि आमा त्यसपछि मात्रै दिदि, बैनी, श्रीमती र छोरी । तर तिनै नारी कहिँ कुमारी कहिँ देउकी कहिँ कम्लरी कहिँ सुसारे कहिँ पाप बन्न विवश छन् ?
छोराले आकाशको सिमा नाघ्दै उचाइ छुनु पर्ने अनि छोरीले धर्ती छोड्न नहुने संस्कारमा हुर्किएका हामी नारी । पुर्णिामाको दिन दिनभर उपवास बसेर राती चन्द्रमालाई अर्घ चढाउँदै ढोग्न अहिले पनि छाडेकी छैनन् मेरि आमाले । त्यही चन्द्रमामा बिज्ञानले आज कुकुर कुदाएर आयो । आलु फलायाे । गुलाफ राेप्याे ।
म धर्मको विद्यार्थी हैन ।न कानुन र बिज्ञान कै विद्यार्थी हुँ म । जिन्दगी नै रहेछ एउटा ठुलो पाठशाला । जहाँ भोगाइका अनुभुतीले मानिसका चेतनाको बिकास गर्देरहेछ ।
अलि अलि चाहिँ भोगियो होला जिन्दगी । तर कुरा चाहिँ धेरै गरियो । हिजो राष्ट्र राष्ट्रियताका कुरा गरियो , खुकुरी , भाला , बन्दुक र बारुदका कुरा गरियो । प्रेममा मातका,घातका र जातका कुरा पनि गरियो । क्षेत्र ,बर्ग ,लिंङ्ग ,धर्म ,संस्कृति र परम्पराका कुरा गरियो ।
चिया पसलमा गरियो , दारु पसलमा गरियो , ठुला ठुला मन्चमा गरियो । मिटिङ्ग , भेला , भिड र मेलामा गरियो । उठेर गरियो , बसेर गरियो , हिंड्दा हिंड्दै गरियो ।
मानव सभ्यताका उत्सर्गभन्दा माथी उठेर ठुला ठुला कुराहरुको ब्यापार गरियो । शुन्यमा - सामाजिक मुल्य मान्यता र सकारात्मक परिवर्तनका थोरै जोड घटाउ नदेखिएका भने हैनन् । तर समाजमा धेरै समस्या - रुप बद्लिएर र केहि समस्या यथास्थिति मै छन् आज पनि ।
यहाँहरुलाई म विषय वस्तु भन्दा बाहिर रहेर कुरा गरिरहेकी छु झैँ लागि रहेको हुनसक्छ। यस्को निम्ति क्षमा चाहान्छु । यी सबै कुरा हामीसंगै जोडिएका हुनाले पनि मैले आफ्नै वरिपरिका थोरै कुरा प्रस्तुत गर्न खोजेँ ।
म पनि यही समाजको रिति रिवाज र परिवेशबाट जीवन भोग्दै आएकी एक आम नारी हुँ । जहाँ छोरीलाई सानै उमेरबाट धर्म र लिङ्गका आडमा मनगणन्ते हावादारीउखान सुनाइ सुनाइ कमजोर बनाइन्छ। अनि साना साना सम्मान र खुसीकै आशमा सामाजिक र धार्मिक बन्धनभित्र चुपचाप उभिने बनाइन्छ।
आधुनिक युगका हामी सभ्य मनुवा(समाज )का केही असभ्य कर्तुतबारे लेख्दै छु । तर के लेख्दै छु भनेर भ्याउ पाउनु भएन हगी ? उसे भए म सिधै बिषय वस्तुतिर प्रवेश गर्छु अब ।
सामाजिक न्याय र समताका लागि पहल नेपालले मर्यादित महिनावारी पाप कि प्रतिक विषयक एक महिने विशेष अभियान सुरुवात गरेकाे छ । याे ऐतिहासिक कार्यकाे लागि बधाइ र शुभकामना । दिन्छु अनि मेरा केहि कच्चा विचार हरु मेरा प्रिय पाठक सामु पुर्याइदिने जिम्मेबार मिडिया सारङ्गी न्यूजमार्फत ।
मेरा प्रिय भावक
मेरे विचारमा हाम्रो हिन्दु धर्म संस्कारमा आज नारीले बाँचेको चुनौतीपुर्ण जीवनभित्र धेरै जटिल अदृश्य सिक्रीहरु छन् । नारीमुक्तीकाे बन्धन र उत्पिडनकाे चरम रुप , लैंगिक विभेदकाे पराकाष्ठ हाे " महिनावारी"
महाशय ! महिनावारी हुनु अछुत हुनु हैन्
भन्नेहरु भन्लान् याे त महिलाहरुमा हुने सामान्य जैविक प्रक्रिया हाे । पाप, धर्म शरम् संग जेडिराख्नु पर्दैन । सुन्न सामान्य लाग्ने यो बिषयले नारीहरुलाई नजानिदो दमन गरिकाे छ । सामान्य जीवन जीउँन पाउँने स्वतन्त्रतामाथी हस्तक्षेप गर्दै नारीलाई कमजोर बनाउँने अस्त्र भएकाे छ महिनावारी । याे उनिहरु कहिले बुझ्लान खै ?
नारी कोमल अवस्य छे तर कमजोर हैन् । कमजोर हाम्रा मानसिकता छन् हुन् । मानव सृजनामा तुलनात्मक हिसाबले पुरुषलाई भन्दा बढी जिम्मेवारी नारीलाई दिएको छ सृष्टिले । तर जीवन बाच्ने सवालमा कि सधैँ दाेस्राे दर्जा ? कि महिनावारीके बहस नै वाइयात हाे भन्ने आधुनिक नारीले अहिले पनि महिनावारी हुँदा चुले चैका गर्ने हिम्मत गर्छे ?
हिजो संस्कारले - शिर झुक्याएर घुँडा टेकाएको थियो नारीलाई .. आजको युगसम्म आइपुग्दा हामी कहाँ र के मा अलमल्लिएका छौं थाहा छैन । या दाेस्राे दर्जा हुनमै गर्व गरिरहेका छाै ?
कानुन भन्छ महिनावारी लैंगिक बिभेद हाे । धर्मले पनि सायद अछुत भन्दैन । धर्म एउटा पवित्र कुरा हो । उ आफैंमा पवित्र छ। तर नारी अस्तित्वमा पवित्रता अपवित्रता भन्ने कुरा चाहिँ मानिसले एकलौटी नियम बनाएर माहिलाहरु माथी लादिएका कुरा हुन् । मानिस हुनेसम्मकाे न्युनतम सम्मान नपाउन भनेर, सधै दाेस्राे दर्जामा राखिराख्न चाहने याे पुरुषसत्ताले नारीमाथी गरिएकाे उत्पिडन हाे महिनावारी ।
आफुभित्र आवाज थुनेर मौन संवाद आफैंसंग मात्र गर्ने हैन् । अब आफु बाँचेकाे समय र समाजलाई सुन्दर बनाउने हाे । मर्यादित महिनावारी, नारी सम्मान र सुरक्षित जीवन पहिचानको खोजीको निम्ति यो 'युद्ध' समयको उर्दी हो । याे समय हाम्राे पनि हाे । याे समाज, याे हावा ,याे पानी र याे युग पनि हाम्राै हाे ।
नौ महिना सातदिन सम्म आफ्नो गर्भमा राखेर एउटा " प्राणलाई जन्माएर धर्तीमा टेकाउँदै संसार देखाउँने नारी हुन्। महिनावारी प्रकृतिको नियम हाे । कति भनु- महिनावारी हुनु अछुत हुनु हैन, महिला झन स्वस्थ्य र सकृय रहनु हो । नारीको शारीरिक अवस्था नर्मल रहनु हो।
महिनावारी भएको बेला नारी अपवित्र हैन कमजोर भएका हुन्छन् । कतिलाई यो अवस्थामा टाउको दुख्ने , वाक्क आउने, तल्लो पेट दुख्ने , रिंगटा आउने , केही खान मन नलाग्ने शरीर सबै दुख्ने जस्ता समस्या हुन्छ । यस्तो बेला उसलाई आराम र पौष्टिक खाना र राम्रो वातावरणको जरुरत हुन्छ ।
सनातन देखिनै याे समाजले राम्रा कार्य गर्नुपरेमा, कसैलाई कमजोर बनाउन परेमा ,कसैसंग दुश्मनी साद्ध्नु परेमा र कसैलाई शोषण गर्नु परेमा धेरै जसो धर्मकै आडमा गरिन्थ्यो । छ । तिनै मनुवादी संस्कार अहिलेसम्म पनि समाजमा सकृय छन् । धर्मकाे नाममा अपराध गरिएकाे छ । किन भने संविधन प्रदत्त मैलिक हकबाट बन्चित छन् महिलाहरु । याे भन्दा अर्काे कुनै पाप ? अर्काे कुनै अपराध हाेला संसारमा ?
जमाना कहाँ बाट कहाँ पुगिसक्यो, मुलुकहरु मंगलग्रहमा बस्ति बसाउने तयारीमा छन्। हामी भने घरमा रोगले थलापरेका हजुरबालाई औषधी किन्न बजार निस्कँदा बिरालाले बाटो काट्यो भने साइत बिग्रीयो भनेर बिचबाटो बाटै घर फर्कन्छौँ अझै ।
हामी कहाँ छौँ .?
त्यसैले अब दुनियाँ बदल्न तिर हैन , समाज बदल्न तिर हैन , पहिला आफ्नै मन बदल्न तिर लागौं । हामी भित्रका रुढीबादी सोच र घटिया मानसिकता बदल्न तिर लागौं । दुनियाँ आफैं बदलिन्छ । समाज आफैं बदलिन्छ। किन भने समाज भने कै म हुँ । म भनेको समाज , अनि समाज भनेको दुनियाँ ।
हामी प्रत्येकले , मात्र आफ्नो हृदय परिवर्तन गर्दा पुग्छ भने , म किन मसाल बोकेर हिँडु ?..परिवर्तन खोज्न ! पहिचान र आत्मसम्मानकै खाँतिर ।
यदि पापका कुरा, मानव शारीरिकका फरक ढाचा र तिनका कार्यशैलीमा आउँछ भने , सूर्यले सबैतिर बराबर उज्यालो दिनुपर्छ भन्ने धर्म चाहिँ खै त ..?
ढुंगामा देउता देख्ने हाम्रो समाज - हिजो जुनकुराका प्रचलन थियो त्यसैलाई टेकेर चलिरहेको छ आजसम्म पनि । र सधैं चलिरहन चाहान्छ ।
अब सवाल पाप धर्मको हैन , अब महत्त्वपूर्ण सवाल त पारिवारिक र सामाजिक ब्यवहारको हुनेछ । मेरी आमाले सृष्टि धानिदिएकि थिईन र म यस धर्तीमा छु । यो शिलशिला सारा जगतमा निरन्तर चलिरहेछ र चलिरहनेछ सदा। तर समस्या कहाँ देखिए .? प्रक्रियामा ..! आपत्ति कसलाई भयो .? मेरो बुवालाई , मेरो दाजु वा भाइलाई , मेरो काका , मामा र मितबाउ लाई ..! तर जुन पीडा र समस्या सधैं भोगिरहेकी छिन् नि आमा .? आजसम्म आपत्ति भयो कसैलाई ..? छाउपडिमा सुतेकी छोरी गुफाभित्रै सर्पले डसेर मर्छे , समयमा खान नपाएर भोकले भित्रै मडारिन्छे , रगतका दहमा बसेर शारीरिक पीडाले भक्कानिदै रोहिरहन्छे । तर हाम्रो धर्म चुपचाप रमिता हेर्दै बसिरहन्छ। के यही नै हे तिमिले भनेके धर्म ? तर हामी भने बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्परालाई छाडेनौं । न बिरालो किन बाँधे बाजेले बुझ्ने तिर लाग्यौं।
डक्टरले औषधी लेखेर दिएको पुर्जी बिरामीलाई ढोगाएर बिरामीका सिरानमा राखिदिए के होला ..?
अब इतिहास बद्लनुपर्छ
नारी पुरुष बराबर , जीवन जिउँने अधिकार बराबर भन्दै गर्छौ हामी । तर आफैंमा अर्थिन नसकेको मानसिकताबाट नि: सन्देह हामी नारी, आफ्नै आँगनीमा बिभेदी युद्धका गोली छल्दै निरीह जीवन बाँच्न बाध्य छौँ । मैले माथिनै भनिसकेँ मर्यादित महिनावारी, नारी सम्मान र सुरक्षित जीवन पहिचानको खोजीको निम्ति यो 'युद्ध' समयको उर्दी हो । यहि युद्धले अब गलत नियत र निति बदल्नु पर्छ ।
सक्नेले मात्र शासन गर्ने थलो ,बिधिको शासन नभएको हाम्रो देशमा नारीलाई कि सुरक्षा देउ कि बन्दुक देउ भन्नुपर्ने अवस्थामा महिलाप्रतिका अन्य विषयका बिभेदसंगै मर्यादित महिनावारी पाप हैन स्वथ्य नारीकाे प्रतिक हो । यो ब्यक्ति विशेष मुद्दा हैन , न नारीहरुको मात्र मुद्दा हो यो । न त याे पाराेपकारी संस्था पहल नेपालकाे नै हाे । याे एउटा सिंगाे समाजकाे समस्या हाे । याे देशका हरेक नागरिककाे समस्या हाे । याे राष्टकाे राष्ट्रिय मुद्दा हाे हनुपर्छ । समाजमा रहेका लैंगिक विभद, जातिय विभेद तथा सबै प्रकारका हिंसा र दुव्र्यवहारकाे अन्त्य विना समाज सुन्दर हुने कुरा काेरा कल्पना हाे । हावा कुरा हाे । पागल पन हाे । अत: मर्यादित महिनावारीबारे गाँउ गाँउ वस्तिवस्तीमा बहस गर्दै यस बिषयबस्तुमा भएका कानुनी छिद्र सुधारका प्रयत्न अब राज्यबाट सुरु गरिनु पर्छ । यस्काे लागि समाजमा जागरण ल्याउनुपर्छ । सारङ्गीले अझै तार रेट्नु पर्छ । आफ्नै जीवनकाे लयमा बगाेस् । शुभेक्क्षा ससत् ।
बिहिवार, बैशाख २६, २०७६, ०९:०५:००